Ny fikolokoloana eo amin'ny sofina dia manomboka na miharatsy amin'ny endrika mitaona matetika mandritra ny vanim-potoana. Ny rivotra sy ny rivotra dia miteraka ny fanombohan'ny aretina, ary ny fihenan'ny otrikaretina dia mampiroborobo ny fitomboan'ny bakteria.
Ny fitsaboana maoderina dia manolotra fitaovana isan-karazany amin'ny olana toy izany, saingy ny fomba nentim-paharazana tranainy amin'ny fitsaboana ataon'ny olona dia tsy dia mandaitra loatra.
Ny menaka camphor amin'ny sofina amin'ny otitis ivelany
Ny antony mahatonga an'ity karazana aretina ity dia:
Ny tsy fahampian-tsakafon'ny otrikaretina.
Mamono ny bibikely.
Ratra sy ratra.
Ny otitis ivelany dia tsy miteraka fandrahonana ho an'ny fihainoana, fa misy soritr'aretina tsy mahasosotra amin'ny endriky ny fofona, mirehitra ary manify.
Ny menaka camphorika natao hampidirana ao amin'ny sofina dia tokony ho menatra kely ary hampidirina moramora 2-3 ao anaty lavaka fanasan-damba, alohan'ny fanandramana ny ati-doha, raha misy orona mihelina. Azo averina in-telo isanandro ny fikarakarana.
Mba hanamaivanana ny fofona dia ilaina ny manambatra menaka kamboho amin'ny menaka voa menaka. Io fanafody io koa dia manala ny lolom-po sy ny fahasosorana.
Olona camphorique - ampiasaina amin'ny otitis media amin'ny sofina afovoany
Ny voka-dratsin'ny aretina dia ny aretina sy virosy. Matetika izy io
mitondrà antibiotika. Ho an'ny fitsaboana ivelany amin'ny sofina, ampiasao menaka kampazo:
Atongilano ny lambam-pandriana avy amin'ny volon'ondry miloko mangatsiaka, ny diamondra dia tokony ho tahaka ny lava sofina;
Manofa menaka kely kambana ary alamino miaraka amin'ny alikaola fihinana mitovy amin'ny isa mitovy;
alatsaho ny totozy totoina miaraka amin'ilay fitotoana;
Mba hametrahana tampon-tsofina voatoto mandritra ny 4-5 ora na mandritra ny alina.
Tokony hotohizana ny fitsaboana ny sofina amin'ny alika kaneraly mandra-piverin'ny soritr'aretina fanonerana.
Fanafody solifara kanadiana ho fanafody anatiny
Ny otitis ao anatiny, araka ny fitsipika, dia mitranga noho ny tsy fahampian-tsakafo ny sofina afovoany. Ity no mampidi-doza indrindra amin'ny endrika efa misy amin'izao aretina izao, satria misy fiantraikany goavana be:
Fahavoazana na fihenan'ny sofina.
Ny meningitis dia fiterahana ny vatan'ny atidoha.
Fandiram-bolo mahatsiravina amin'ny sinasisma (sinusitis front, sinusitis).
Amin'ny endriky ny otitis dia tokony hifantoka dokotera foana amin'ny fanendrena fitsaboana feno. Ao anatiny
Matetika ny fanoroana ny sofina amin'ny menaka kampazo:
Atsangaro ny menaka ao anaty rano fandroana;
Manaova gidro efajoro amin'ny 4 layers;
manentana lamba miaraka amin'ny menaka mafana;
mametraka famoretana eo amin'ny sofina voakasik'izany;
Manaova rakotra plastika na tapa-doko matevina;
Atongilano ny sofinao amin'ny mofomamy na mofomamy.
avelao ny fanontam-pirinty mandritra ny alina, indrindra raha tsy mipetraka amin'ny sofin'ny marary.
Raha mandroso ny aretina, ary manomboka ny fihenan'ny fihenan-tsakafo dia hanampy ity manaraka ity:
Mofomamy tongolo vita amin'ny tongolo lay ao amin'ny menaka vy na kofehy vita amin'ny tongolo gilasy;
Mifangaro miaraka amin'ny menaka varimusina miaraka amin'ny menaka fanafody (3 sotro) ny massa;
Manaova fehiloha madinika, aforeto amin'ny halavany;
mametraka ny masomboly-kamboty eo amin'ny lamba, manolora azy ho lasa milina matevina;
ampidiro ny tampon-doha nahazo ny marary 2 ora;
Ny dingana tokony hatao dia atao isaky ny hariva, alohan'ny hatory.
Fanampin'izany, noho ny fanaintainana mafy nandritra ny fampiroboroboana ny otitis fampiasa amin'ny otitis dia manampy toy izao:
Zana-tsokajin-tsolika midadasika mba hanosotra sy hanosihosy ny sira;
Ampiasao ao anatin'io dipoavatra io ny dibera, mialokaloka ao anaty rano;
Ampio menaka antsasakadiny ny menaka kamboho mba hamolavola endrika mafana;
manaisotra tavy rongony miaraka amin'ny vahaolana enti-miasa;
ampidiro ao amin'ny sofina malemy izy io araka izay azo atao;
Mialà 3-4 ora.
Gripa mitaiky ny asidra - soritr'aretina
Fanamaivanana ny vava sy ny lela - fitsaboana
Ny MSCT amin'ny lavaka tsy fahita amin'ny mifanohitra
Fanafody mampihorohoro - fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny olona
Ny fitsaboana fofona entina ao an-trano
ARVI - soritr'aretina sy fitsaboana amin'ny olon-dehibe
Vaksina amin'ny hepatita amin'ny olon-dehibe
Ny gripa hoditra
Ahoana no hampijanonana ny hikopikana?
Famantarana - valala iray ao an-trano
Bakomanga amin'ny aty
Burner Fat "Black Widow"
Ahoana ny fisafidianana Turk iray ho an'ny kafe?
Kianjambana mirakotra sofa lehibe
Ny fanaintainana amin'ny ovulation
Tselatra ao am-po
Tkemali avy amin'ny volon-koditra mavomavo - fantsom-bokin-tsakafo goavam-be Georgiana
Cristiano Ronaldo dia namoaka sary miaraka amin'i Georgina Rodriguez sy ny fianakaviany
Varavarankelin'ny trano anatiny
Calendula amin'ny volo
Nosamborina i Amber Hurd noho ny herisetra nataon'ireo ankizivavy taloha
Mpanakanto Amerikana miondrika sady mpamokatra Eliza Shlesinger voampanga ho nanao firaisana ara-nofo
Fanosihosena avy amin'ny vava - ny antony sy ny fitsaboana
Nutria - fiompiana sy fikojakojana ao an-trano, fitsipika momba ny fiahiana
Sakafo miaraka amin'ny vary sy trondro
Ny fijerena Yoga noho ny fahaverezan'ny lanja
Kely ny tongony - inona no tokony hatao?
Ny hemoglobine glycated dia fitsipika